Dillaaliyeyaasha ugu Wanaagsan ee Ganacsiga ee Ganacsiga 2021
Bogga ugu weyn Dillaaliyeyaasha ugu Wanaagsan ee Ganacsiga ee Ganacsiga 2021
Dillaalku waa qof ama shirkad isku xidha maalgashadayaasha doonaya inay iibsadaan ama iibiyaan dammaanad (sida kaydka ama curaarta) dhinaca kale ee macaamilka.
Iyada oo leh tiro badan oo shirkado dilaaliin ah oo ku yaal Mareykanka, oo u dooranaya dillaaliyeyaasha khadka tooska ah ee ugu fiican ganacsiga saamiyada waxaa laga yaabaa inay ka xumaato. Si taas loo gaaro, maqaalkani wuxuu ka hadlayaa dillaaliyeyaasha khadka tooska ah ee ugu wanaagsan ganacsiga saamiyada sannadka 2021 iyo waxa iyaga ka dhiga xulashada ugu fiican.
Si dhakhso leh u eeg shaxda tusmada ee hoose.
Waa Maxay Dillaaliyihii Hantida ee Onlineka ahaa?
Sida Loo Ogaado Dillaaliyeyaasha Hantida ee Ugu Fiican Online
Waxa Laga Fiirsado Marka La Dooranayo Dillaal
1. aaminnimo Investments
5. Ganacsi E-Ganacsi
6. Brokers-ka Isdhaafsada
Su'aalaha la isweydiiyo ee ku saabsan Dillaaliyeyaasha onlaynka ah ee ugu fiican ee Ganacsiga Ganacsiga
Dillaal online -ka ah waa hay'ad maaliyadeed oo ku siineysa fursad aad ku iibsato dammaanad, sida kaydka, adoo adeegsanaya aaladda internetka. Dillaaliyeyaasha onlaynka ah ayaa mararka qaarkood loogu yeeraa dillaaliyeyaasha sicir-dhimista sababta oo ah khidmaddooda aad bay uga yar yihiin kuwa ay qaadaan shirkad caadi ah oo dallaal ah.
Ma heli doontid talo maaliyadeed oo la mid ah ama talooyin maalgashi oo ka socda dillaaliin intarneedka sida aad uga heli lahayd dillaal-adeeg buuxa, laakiin waxaad ka heli doontaa ganacsi aan komishan lahayn oo aad marin u hesho tiro badan oo adeegyo iyo badeecado kale ah oo ku xidhan hadba qofka aad dillaalka tahay dooro. Maalgashadayaasha badankood, adeegsiga dillaaliinta internetka ayaa macno samaynaya.
ARAG SIDOO KALE: Khariidadaha Kaydka ugu Fiican Sanadka 2021
Koontada dillaalka saamiyada ee ugu fiican ee adiga kugu habboon waxay ku xiran tahay baahidaada. Waa kuwan dhowr waxyaalood oo laga yaabo inaad rabto inaad tixgeliso:
Waxaa laga yaabaa inaadan u baahnayn goob ganacsi oo si buuxda u dhisan haddii aad rabto inaad iibsato oo aad hayso kayd.
Haddii hadafkaaga koowaad uu yahay inaad iibsato maaliyad wadaag ah, raadi dillaal leh xulasho ballaaran oo ah maaliyad wadaag-lacag-la'aan ah.
Maalgashadayaasha markii ugu horreysay oo kaliya doonaya inay maal gashadaan dhowr boqol oo doollar, waa inaad raadsataa dillaal aan lahayn shuruud maalgashi oo ugu yar.
Haddii aad damacsan tahay inaad ka ganacsato curaarta ama ikhtiyaarrada saamiyada, ama haddii aad doorbideyso inaad ku ganacsato taleefanka halkii aad ka ahaan lahayd internetka, isbarbar dhig khidmadaha uu qaado dallaal kasta.
LA XIDHIIDH BADAN: Sida Loo Doorto Hantida Dammaanad -qaadka Soo Celinaysa Maalgashiga
Dillaaliyeyaasha ugu wanaagsan ee khadka tooska ah ee ganacsiga saamiyada waxay siiyaan astaamo u wanaagsan maalgashadayaasha iyo khidmadaha ganacsatadu si fudud bay u caddayn karaan. Si aan ula soo baxno liisaska dillaaliyeyaasha onlaynka ah ee ugu wanaagsan ganacsiga saamiyada, waxaan tixgelinnay qodobbada soo socda:
Price: Markay timaado khidmadaha, waad nasiib badan tahay maxaa yeelay inta badan dillaaliyeyaasha internetka ayaa hoos u dhigay guddiyadii ganacsi ee kaydka iyo ETF -yada illaa $ 0. Khidmadaha iyo kharashaadka ganacsiga ayaa la tixgeliyey markii la uruurinayay liiskan goobaha ganacsi ee ugu wanaagsan ee internetka.
Khayraadka dillaalka: Waxaa muhiim ah inaad tixgeliso arrimo ay ka mid yihiin nooca talooyinka iyo aaladaha cilmi baarista ee dillaalka, tayada barnaamijka ganacsiga dhijitaalka ah, iyo kartida aad ku meelayso xirfadaha si dhakhso leh oo la isku halleyn karo, iyo faahfaahin kale.
Strategy: Koontada aad runtii rabto waxaa go'aamin doona istaraatiijiyadaada maalgashi shaqsiyeed, oo ay kujirto inta jeer ee aad qorsheyneyso inaad ka ganacsato iyo inaad tahay bilaw ama ganacsade khibrad leh. Waxaan fiirineynay sida madal kasta oo maal -gashaneed loogu habeeyay bixinta ay siiso macmiil nooc gaar ah.
Madal ganacsi: Qaar ka mid ah dillaaliyeyaasha saamiyada ee khadka tooska ah waxay leeyihiin aalado ganacsi saamiyada tooska ah oo dhammaystiran oo adag iyo barnaamijyo ay heli karaan ganacsatada soo noqnoqda, iyo sidoo kale adeegyada faylalka maareynta sida Robo-lataliyayaasha. Halka kuwa wax-iibiyaasha ah ay qaataan hab fudud oo fudud oo adeegsadaha ku habboon. Doorashadayada dillaaliyeyaasha ugu wanaagsan ee khadka tooska ah ee ganacsiga saamiyada waxaa lagu saleeyay adeegsiga, fududeynta gelitaanka, iyo saaxiibtinimada madal ganacsi.
Akhri ALSO: 15 Kayd ee ugu Fiican Ganacsiga Maalinlaha ee 2021 [La Cusboonaysiiyay]
Waa tan liiska dillaaliyeyaasha khadka tooska ah ee ugu wanaagsan ganacsiga saamiyada 2021:
aaminnimo wuxuu leeyahay sumcad adag siinta qaar ka mid ah cilmi -baarista ugu fiican iyo aaladaha maalgashadayaasha hawlgabka ah. Macluumaadka laga heli karo goobtiisa, oo ay ku jiraan aaladaha baarista ee casriga ah, ayaa koontada ka dhigaysa ikhtiyaar wanaagsan oo loogu talagalay maalgashadayaasha raadinaya inay si qoto dheer u dhex galaan.
Haddii aad raadineyso goob ganacsi oo aad u fiican, guddiyo hooseeya, ama taageero macmiil oo waxtar leh, Daacadnimadu waa xulashada saxda ah. Dillaalkan khadka tooska ah wax walba si fiican buu u sameeyaa, waana xulasho maalgashi-saaxiibtinimo weyn leh, gaar ahaan haddii aad hadda bilowdo, laakiin si fiican ugu shaqeeya maalgashadayaasha horumarsan, sidoo kale.
Qiimaha: Daacadnimadu waxay hoos u dhigtay guddiyadii ganacsi eber, faa'ido ayay u tahay dhammaan ganacsatada, laakiin gaar ahaan maalgashadayaasha iibsashada iyo haynta muddada dheer. Daacadnimadu waxay kaloo leedahay khidmado eber ah adeegyo kale oo badan oo dillaaliinta kale ay si joogto ah uga qaadaan.
Akhri ALSO: Fidelity Vs Vanguard Investment 2021: Waa maxay sababta ay tahay inaad u doorato mid kasta oo ka mid ah dallaaliyeyaashaas
TD Ameritrade waa dillaal saamileyda internetka ah oo la yaab leh oo loogu talagalay maalgashadayaasha awoodaha oo dhan, haddii aad u baahan tahay hagitaan iyo waxbarasho marka aad bilowdo ama marka aad diyaar u tahay inaad u weecato madal-ganacsiyeedka khafiifka ah ee awoodda sare leh. Si kastaba ha ahaatee, waxaad u badan tahay inaad ka hesho waxaad u baahan tahay TD Ameritrade.
Dillaalkan khadka tooska ah ee ganacsiga saamiyada ayaa ku siinaya marin u helka maktabad ka kooban waxyaabo waxbarasho oo ay ku jiraan fiidyowyo, baahinta shabakadaha, iyo kumanaan maqaallo ah. Haa, taasi waxay u ekaan kartaa xoogaa xad -dhaaf ah, laakiin waxaad si sax ah u dooran kartaa macluumaadka aad u baahan tahay, haddii aad tahay qof cusub ama khabiir raadinaya gees kale oo dheeri ah.
TD Ameritrade, waxaad ku iibsan kartaa oo ku iibin kartaa damaanado kala duwan oo ka baxsan kaydka. Dammaanad, ikhtiyaarro, iyo mustaqbal ayaa la heli karaa, sidoo kale waxaad ku ganacsan kartaa cryptocurrency adoo adeegsanaya mustaqbalka. Waxaad ku wada samayn kartaa adiga oo adeegsanaya app -ka guur -guura ee mobile -ka, sidoo kale.
Qiimaha: TD Ameritrade kuma dallacdo wax guddi ah saamiyadeeda iyo ganacsiyada ETF, ikhtiyaarrada ganacsiguna hadda waxay ku kacayaan $ 0.65 heshiis kasta, Iyadoo aan lahayn xisaab ugu yar, TD Ameritrade ayaa ah ikhtiyaar soo jiidasho leh bilowga ah.
ARAG SIDOO KALE: 15 Madal ee Ganacsi Hantida Online ee ugu Fiican Sanadka 2021
Waxaa ku qiimeeyay JD Power laga soo bilaabo 2016-18 isagoo ah “kan ugu sarreeya Maal-geliyaha Qanacsanaanta Shirkadaha Dillaalka ee Adeegga Buuxda, Saddex Sano oo Saf ah.” Charles Schwab wuxuu leeyahay taariikh caawinta maal-gashadayaasha shaqsiga ah.
Guud ahaan, dilaaliinta internetka ayaa weli ah doorasho wanaagsan, oo bixisa qalab ganacsi oo gaar ah, taageero macmiil oo aad u wanaagsan, iyo cilmi baaris iyo agab waxbarasho oo aad u ballaaran, dhammaantood iyadoon wax lacag ah la saarin.
Charles Schwab wuxuu kaloo leeyahay siyaasad adeeg macmiil oo hal -abuur leh oo sheegaysa in macaamiishu ka heli karaan guddiyada la xiriira, khidmadda macaamilka, ama barnaamijka la -talinta haddii ay dareemaan inaysan ku qanacsanayn.
Qiimaha: Schwab waxay la kulantay heerkii warshadaha ee saamiyada iyo guddiyadii ETF-eber-taas oo ay ka caawisay soo gelitaanka. Xirfadaha ikhtiyaariga, in kastoo, ay wali soo garaacayaan $ 0.65 khidmad-qandaraaskiiba.
Robinhood waa qof ku cusub, adduunka saamiyada online -ka ah. Si kastaba ha ahaatee, waxay samaysay buufin deg-deg ah, oo ay ku horumarinayso malaayiin taageerayaal ah oo u heellan ganacsigeeda aan komishanka lahayn iyo app-ka gacanta ee saaxiibtinimo leh.
On Robinhood, waxaad awoodi doontaa inaad ku ganacsato saamiyada iyo ETF -yada lacag la'aan, iyo sidoo kale xulashooyinka iyo cryptocurrencies. Waxa kale oo ka mid ah koontada maamulka lacagta caddaanka ah, oo kuu oggolaanaysa inaad si dhakhso leh u wareejiso mar kasta oo aad rabto inaad ka ganacsato.
Aaladaha cilmi-baarista ee Robinhood way ka xoog yar yihiin (ku dhawaad ​​aan jirin) marka loo eego kuwa dallaaliyeyaasha kale, laakiin waxaad ku biiri kartaa darajadooda qaaliga ah, Robinhood Gold, $ 5 bishii oo aad marin u heli kartaa xoogaa cilmi-baaris ah iyo ganacsi xad-dhaaf ah. Hal qasaaro ayaa ah, waqtigan xaadirka ah, Robinhood wuxuu bixiyaa koontooyin shaqsiyeed oo la canshuuro, in kasta oo uu rajaynayo inuu ku sii fido akoonnada wadaagga ah iyo IRAs mustaqbalka.
Qiimaha: Robinhood wuxuu bixiyaa saamiyada eber-ka iyo ganacsiga ETF, laakiin wuxuu kaloo ku dadaalayaa inuu carqaladeeyo warshadaha oo uu noqdo barxad bixisa dhammaan noocyada alaabada iyo adeegyada maaliyadeed. Tusaale ahaan, waxay sidoo kale bixisaa ganacsi bilaash ah xulashooyinka iyo cryptocurrency.
E-Trade waa mid ka mid ah dillaaliyeyaasha kaydka tooska ah ee internetka, oo bixiya ikhtiyaar adag iyada oo aan loo eegin haddii aad tahay maalgaliye dadban ama firfircoon, qof cusub, ama khabiir ah. Waxay leedahay qayb waxbarasho oo aad u fiican, oo ay kujirto kaliya helitaanka aaladaha waxbarasho laakiin sidoo kale duufaanta webinars -ka, goos gooska wararka, iyo fiidyowyada waxbarasho ee ku wajahan maalgashadayaasha heerarka kala duwan. E-Trade sidoo kale waxay u oggolaaneysaa adeegsadayaasha inay la xiriiraan falanqeeyayaasha E-Trade si ay ula socdaan falanqaynta iyo faallooyinka ugu dambeeyay ee kaa caawin kara kobcinta istiraatiijiyaddaada ganacsi.
Waxa kale oo ay bixisaa taageero taleefan oo aan joogsi lahayn iyo ikhtiyaarka wada sheekaysiga onlaynka ah. Ganacsatada firfircoon ayaa laga yaabaa inay qaddariyaan madal-ganacsiyeedka calan-qaadka ee Dillaalka, Power E-Trade, kaas oo bixiya qalab fara badan oo ku yimaadda nooca mobilada, sidoo kale.
Qiimaha: Sida dillaaliyeyaasha kale ee muhiimka ah ee khadka tooska ah, E-Trade waxay ku dallacaan eber guddiyada saamiyada iyo ganacsiyada ETF iyo $ 0.65 heshiiskii ikhtiyaarrada. Ganacsatadu waxay heli karaan guddi qiimo -dhimis ah oo ah $ 0.50 qandaraas kasta haddii ay sameeyaan 30 ama ka badan meheraddo rubuc kasta.
Brokers Interactive ayaa muddo dheer loo arkaa inay tahay dillaal u ah xirfadleyda iyo maalgashadayaasha firfircoon, oo leh goob ganacsi oo xoog leh iyo fulinta ganacsi aad u wanaagsan. Si kastaba ha ahaatee, waxay ku talaabsatay sanadihii la soo dhaafay inay noqoto mid soo jiidata maalgashadayaasha cusub, gaar ahaan nooca “lite” ee adeeggeeda oo ay ku jirto ganacsi lacag la’aan ah. Waxa kale oo ay wanaajisay adeeggeeda macmiilka iyo cilmi -baadhista asaasiga ah.
Isbeddelkani wuxuu hagaajiyay cidhifyadii adkaa ee adeeg aan hore u jirin oo xitaa kuwa loo malaynayo in loo maleeyay in la jaangooyay qiimaha jaban iyo fulinta ganacsiga. Bogga taageerada macmiilka ee dhowaan la naqshadeeyay ayaa u sahlan in la dhex maro iyada oo la ilaalinayo heerka sare ee shaqaynta bogga hore.
Qiimaha: Dillaaliyeyaasha Interactive waxay ahaayeen xoog wadista ka dambeysa wareejinta warshadaha ee iibinta saamiyada lacag la'aanta ah. Adeeggeeda Lite waa bilaash, halka adeeggeeda Pro uu ku kacayo $ 1 halkii ganacsiba ilaa 200 oo saamiyo, iyadoo saamiyada ku xiga ay ku kacayaan midkiiba nus dinaar, in kasta oo qiimaha mugga la heli karo. Qandaraasyada ikhtiyaariga ah waxay ku kacayaan $ 0.65 heshiiskiiba, qiimaynta mugga ku saleysan ayaa sidoo kale loo heli karaa ganacsatada runtii firfircoon.
Faahfaahin dheeraad ah ka akhriso Dib -u -eegista buuxda ee Bankrate ee Brokers Interactive.
Merrill Edge waa adeeg dillaaliye kayd online ah oo adeeg buuxa leh oo siiya qalabyo tayo sare leh ganacsatada iyadoo waliba u adeegaysa maalgashadayaasha cusub. Tani waxay si gaar ah u muuqataa marka aad tixgeliso in dillaaliyuhu uu leeyahay in ka badan 2,000 goobood oo ku yaal laamaha Bangiga Ameerika ee waalidka, taasoo ka dhigaysa la -taliyayaasha aadanaha inay si fudud u heli karaan, taas oo si gaar ah qiimo ugu leh maalgashadayaasha cusub ee u baahan hagid.
Waxaad heli kartaa warbixinno cilmi -baaris oo faahfaahsan oo ku saabsan kaydka shaqsiyeed haddii aad noqoto macmiilka aad doorbidayso dallaalka, laakiin sidoo kale waxaad cilmi -baaris ka heli kartaa Morningstar iyo Lipper. Merrill sidoo kale waxay ku fiican tahay ilaha waxbarasho ee kaa caawinaya qorsheynta mustaqbalkaaga maaliyadeed. Adeegga macmiilku wuxuu diyaar yahay 24 saacadood maalintii, toddoba maalmood toddobaadkii, markaa qof ayaa had iyo jeer diyaar u ah inuu ku caawiyo.
Qiimaha: Merrill Edge waxay ku dallacdaa eber khidmad ah saamiyada saamiyada iyo ETF, halka xirfadaha ikhtiyaariyada ay ku yimaadaan $ 0.65 heshiiskiiba, oo la jaan qaada inta badan warshadaha.
Waa maxay nooca koontada dilaalnimo ee aan doorto?
Xulashada xisaabtaadu waxay ku dhaceysaa koonto dillaalineed oo la canshuuro oo ka soo horjeeda koontada hawlgabka ee canshuur-doonka ah, sida IRA.
Miyaan kaliya doortaa dillaalka ugu jaban?
Kharashyada ganacsigu dhab ahaantii waxay muhiim u yihiin ganacsatada firfircoon iyo kuwa mugga badan leh, laakiin dillaaliin badan ayaa hadda bixiya xirfado aan komishan lahayn oo ku jira kaydka, ETF-yada, iyo xulashooyinka. Waxyaalaha kale, sida helitaanka maalgashiyo kala duwan oo kala duwan ama qalab tababar, ayaa laga yaabaa inay ka qiimo badan yihiin kaydinta dhawr doolar marka la iibsanayo saamiyada.
Intee in le'eg ayaan bilaabi karaa ganacsiga?
Ka dib markaad furato koontada, waxaad u baahan doontaa inaad dhigato deebaaji ama aad lacag ku wareejiso shirkadda dillaalka, taasoo qaadan karta dhowr maalmood illaa toddobaad. Marka taas la dhammeeyo, waa waqtigii la bilaabi lahaa maalgashiga! Taasna, waxaan ula jeednaa in si ula kac ah oo anshax leh loo wajaho maalgelinta muddada-dheer.
Waa maxay ganacsadaha saamiyada internetka ugu jaban?
Markaad raadinayso ganacsade rakhiis ah oo raqiis ah, qod qoto dheer marka loo eego saamiyada iyo xirfadaha ETF maadaama dhammaan aagagga ganacsiga ee internetka lagu bixiyo kuwan $ 0.
Ma iibsan karaa keyd la'aan dillaal la'aan?
Mararka qaarkood waa suurtogal (laakiin caadiyan aad bay u dhib badan tahay) in la iibsado kaydka iyada oo aan la dallaalin. Waxaad badanaa u baahan doontaa hanti aad u badan si aad uga faa'iidaysato habab kale.
Ma rabtaa inaad ka ganacsato kaydka? Waxaad u baahan doontaa dillaaliin onlayn ah, dillaalkaasina waa inuu bixiyaa ugu yaraan maalgashi caddaalad ah, qalab ganacsi oo tayo sare leh, marin adag u leh adeegga macmiilka, iyo khidmad xisaabeed oo qarsoon.
bankrate.com Dillaaliyeyaasha khadka tooska ah ee ugu wanaagsan saamiyada bisha Sebtember 2021
nerdwallet.com - 11 Dillaaliyeyaasha Khadka tooska ah ugu Fiican ee Ganacsiga Ganacsiga Oktoobar 2021
nacasnimo.comDillaaliyeyaasha Hantidhowrka ee ugu Fiican Oktoobar 2021
Goorma ayay tahay waqtiga ku habboon in la Iibsado & Iibinta Saami 2021?
Sida Loo Doorto Hantida Dammaanad -qaadka Soo Celinaysa Maalgashiga
Software -ka Canshuurta ee ugu Fiican 2021
Marka ay timaado sameynta go'aamada waaweyn ee maaliyadeed, mararka qaarkood waxaa nagu soo fataha xulashooyinka maalgashiga ee kala duwan oo noqda
Dib -u -eegista Hashing24 2022: Ma Sharcibaa Mise Khayaano Macdanta Cusub oo Cusub oo kale
Haddii aad xiisaynayso macdanta cryptocurrency, laakiin weli inaad bilowdo, Hashing24 waa tan ugu fudud uguna habboon…
Dib -u -eegista Hashflare.io 2022: Sidee bay u Shaqaysaa | Faa'iidooyinka & Qasaarooyinka
Ma hashflare.io Been abuur baa mise waa sharci? Tani waa mid ka mid ah su'aalaha ku jira dibnaha inta badan kuwa bilowga ah ee eegaya…